ယာရက် Kushner ရဲ့ညီအစျကိုဝါရှင်တန်, D.C. အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာသည်မတ်လမှာခဲ့
ယောရှုသည် Kushner ဝါရှင်တန်ဒီစီအတွက်မတ်လ 24, 2018 ရက်တွင်ကျွန်မတို့ရဲ့အသက်တာသည်မတ်လအတွင်းမှာမြင်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
လိမ္မော်ရောင်နှင်းဥရောပအစိတ်အပိုင်းများဒီ Weekend Hit
တစ်ဦးကရိုမေးနီးယားအမျိုးသမီးတစ်ဦးကမတ်လ 23, 2018 ရက်တွင်ဘူခါရက်ထဲမှာဆီးနှင်းအပြည့်အဝမယ့်လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်
Facebook ကသတင်းစာကြော်ငြာအတွက်ကင်းဘရစ် Analytica မြွေပူရာကင်းဘို့တောင်းပန်
TOPSHOT - လူ Ripon အတွက်သတင်းစာများ၏ backpage ရက်နေ့တွင်, လူမှုကွန်ယက်ကနေပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အကြီးစားယိုစိမ့်မှုအတွက်တောင်းပန် Mark Zuckerberg ဟာ Facebook က၏ဥက္ကဋ္ဌနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ Full-စာမျက်နှာ Advertising, ဖတ် မတ်လ 25, 2018 ရက်တွင်အင်္ဂလန်။
Facebook ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Mark Zuckerberg ဟာကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသီးသန့်တည်ရှိမှုအရှုပ်တော်ပုံဘို့တောင်းပန်ရန်, မတ်လ 25, 2018 ရက်တွင်အားလုံးနီးပါးဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အမျိုးသားရေးသတင်းစာများ၏အတွင်းအပြည့်အဝ-စာမျက်နှာကြော်ငြာတွေကိုထုတ်ယူခဲ့ပါတယ်။ / AFP PHOTO / Oli SCARFF (ဓာတ်ပုံအကြွေး Oli SCARFF / AFP / Getty Images ဖတ်သင့်)
Pacific Rim: လူထုအုံကြွမှု box Office ရဲမှာက Black Panther Down ယူ
သင်သိပါဖို့လို 8 က Hidden Facebook ကိုလှည့်ကွက်
Lisa EADICICCO နဲ့ Jack LINSHI အားဖြင့်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: မတ်လ 9, 2017 9:30 pm တွင် ET | မူလကထုတ်ဝေ: ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2015
ထက်ပိုမို 1 ဘီလီယံကလူကိုမှန်မှန် Facebook ကိုအသုံးပြုပေမယ့်သူတို့ကလူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းကိုအသုံးပြုပြီးအားလုံးကိုလြှို့ဝှကျအလှည့်ကွက်ကိုသိရမဆိုလိုပါ။ Facebook နှင့်ယင်း၏မက်ဆေ့ခ်ျပို့အဖော် app ကိုနှစ်ဦးစလုံးအဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲယဉ်းတက်ကိုစောင့်ရှောက်စေနိုငျသော features အသစ်နှင့်ဒီဇိုင်းအသစ်နှင့်အတူသက်သာစေလျက်ရှိသည်။
ဤတွင်သေချာသင်သည်သင်၏ Facebook မှာဂိမ်း၏ထိပ်ပေါ်မှာဆိုရင်လုပ်ရှစ်လှည့်ကွက်နေသောခေါင်းစဉ်:
အစဉ်အမြဲ scrolling မပါဘဲအဟောင်း Facebook မှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖတ်ပါ
အတောမသတ်ပြောဆိုမှုများမှတဆင့် scrolling မပါဘဲမှတ်ဉာဏ်လမ်းသွားဆင်း (နှင့်တစ်ဦးအလွန်ကြီးစွာသော #tbt များအတွက်) ခရီးစဉ်များအတွက်အဆင်သင့်ရယူပါ။ သငျသညျမိတ်ဆွေတစ်ဦးမှစလှေတျတျောကိုပထမဆုံး Facebook မှာမက်ဆေ့ခ်ျကိုမြင်ရဖို့အလွယ်ကူဆုံး (သို့သော်အနှေးဆုံး) လမ်းသငျသညျ General Settings ကိုသွားနှင့်အောက်ဆုံး link ကိုအောက်ပါတို့ကလုပျနိုငျသမျှသောသင်၏အ Facebook မှဒေတာ, ကို download လုပ်ပါရန်ဖြစ်ပါသည်။ function ကိုအခြားဒေတာများတို့တွင်အသငျသညျအစဉျအမွဲလှေတျတျောမူပါတယ်တိုင်းတစ်ခုတည်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုနှစ်စဉ်ပြုစုသောကွောငျ့ဤအနာရီသို့မဟုတ်ရက်ပေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ဤတွင်ပိုမိုမြန်ဆန်လမ်းဖွင့်: Facebook ကိုတွင် desktop ပေါ်ကအဘို့, https://m.facebook.com/messages/ သွားပါ။ (ဤသင်သည်သင်၏အားသာချက်အသုံးပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်အရာ, ကွဲပြားခြားနားမိုဘိုင်း site ကိုဖြစ်ပါသည်, နှင့်၎င်း၏ URL များကို display တွေ။ ) အခုတော့မိတ်ဆွေတစ်ဦးရဲ့အချက်တင်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ပါ။ ညာဘက်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါအသက်ကြီးမက်ဆေ့ခ်ျကိုကြည့်ပါ ... အသစ်တစ်ခု tab ကိုသို့မဟုတ်ပြတင်းပေါက်၌ link ကိုဖွင့်လှစ်။ အခုအသစ်စာမျက်နှာ၌, သင်နံပါတ်များကိုအများကြီးနဲ့တာရှည် URL ကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ပြောပါတယ် &7= start သောအစိတ်အပိုင်းကိုရှာဖွေပါ။
အဆိုပါ "7" ပေါ်လာကြောင်းအညွှန်းမက်ဆေ့ခ်ျကိုရည်ညွှန်းသည်။ သင့်ရဲ့မက်ဆေ့ခ်ျများမကြာသေးမီလတ်တလောအနေဖြင့်အနည်းဆုံးဖို့ ... , 1 ကနေရည်ညွှန်း 2,3နေကြသည်။ ဒီရှေးအကျဆုံးမက်ဆေ့ခ်ျမှဖြောင့်ကိုသင်ရလိမ့်မယ် - သင်အစဉ်အဆက်သင်၏အဆွေခင်ပွန်းထံသို့စေလွှတ်င့်ရဲ့ Facebook မက်ဆေ့ခ်ျ၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်အဖြစ်နီးစပ်ကြောင်းအရေအတွက်ကိုသတ်မှတ်ဖို့နှင့်စာမျက်နှာ refresh ချင်တာပေါ့။
သင်တန်း၏, သင်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူဖလှယ်င့်မက်ဆေ့ခ်ျ၏အရေအတွက်အတိအကျကိုဆင်းကိုခြေရာခံနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သငျသညျအနှစျတပေါ်သယ်ဆောင်ရဲ့တစ်ဦးချည်အတွက်အဟောင်းတွေမက်ဆေ့ခ်ျများကြည့်ရှုရန်ကြိုးစားနေလျှင်မူကား, အရာပေါင်းများစွာအတွက်မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုကိုအရေအတွက်က setting ဖွယ်ရှိသင်လူတစ်ဦးနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဘယ်လိုမကြာခဏပေါ် မူတည်. အနှစ်ပင်လအတွင်းသင်ဆောင်ခဲ့ပြန်, ဒါမှမဟုတ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏အစာကျွေးခြင်းအတွက်ပေါ်လာကြောင်းသတင်းပုံပြင်များအပေါငျးတို့သဖတ်ရှုဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုရငျ, နောက်ပိုင်းတွင်အဘို့ထိုသူတို့ချွေတာဖို့ကြိုးစားပါ။ ရုံဘလော့ခ်ပို့စ်ရဲ့အပေါ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာပေါ်လာမည်ဖြစ်ကာ, select လုပ်ပါသောမြှားကိုအသာပုတ်သို့မဟုတ် click နှိပ်ပြီး "post ကို Save လုပ်ထားပါ။ "
သင်ကသတင်းပုံပြင်မှ link တစ်ခု, တစ်ဦးကဗီဒီယို, ဒါမှမဟုတ်မီဒီယာအချို့နဲ့အခြားအမျိုးအစားဖြစ်စေ, စာတိုက်မဆိုအမျိုးအစားအဘို့ဤလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျတခု post ကိုကယ်တင်သည့် Facebook ကို app ရဲ့အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာမီနူးအိုင်ကွန်ကိုထိပုတ်ပါနှင့် "Save" option ကိုနှိပ်ပြီးနောက်။ Desktop ပေါ်မှာ, ရုံမျက်နှာပြင်၏ညာဘက်ခြမ်းတလျှောက် tab ကို Explore ကိုနှိပ်ပါအောက်မှာကြည့်ရှု "ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ "
Read more: သင် Facebook ပေါ်မှာဖြုန်းကြပါပြီဘယ်လောက်အချိန်?
ပို့စ်များကိုအတည်ပြုသူတို့သည်သင်၏ Timeline ကိုပေါ်မရောက်မီသင်၌ tagged နေ
သင်အမြဲသင်တို့တွင်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကို Facebook ပေါ်တွင်တက်အဆုံးသတ်ထားတဲ့မထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော်သင်သည်သင်၏ Timeline ကိုအပေါ်ကိုတက်ဖေါ်ပြခြင်းကနေမလိုလားအပ်တဲ့ Tagged ပို့စ်များကိုတားဆီးနိုင်ပါတယ်။ Timeline ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအပေါ်လှည့်လျှင်, သင်သည်ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, နှင့်သင်တို့အထဲ၌ tagged နေသည်အခြားပို့စ်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်သူတို့သည်သင်၏ Timeline ကိုပေါ်ခြင်းရှိမရှိကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Desktop ပေါ်မှာမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်တွင်တည်ရှိသောဆင်းမြှားကိုနှိပ်ပါ, ရှေးခယျြ "Activity Log ။ " ထို့နောရှေးခယျြ "Timeline ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း," နှင့် setting များကိုအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပါ။ တစ်ဦးက dialogue box ပေါ်လာ
Hey @goldbloger5, gotta love Steemit! Still awesome platform and community and it's nice having great people contribute so we all benefit. Keep up the good work! Cheers!